Nepali Incest Sex Story : चिकारु बहिनीलाई बाउले पुती चिक्यो, दाईले चाक - Nepali Sex Story
Home bahini sanga chikeko katha bahinilai chikeko katha bau chori incest story Nepali Incest Sex Story Nepali Sex Story in Nepali Nepali Incest Sex Story : चिकारु बहिनीलाई बाउले पुती चिक्यो, दाईले चाक
म टेक्सी लिएर धापासी घर हिंडे । घर पुगेर मैले डोरवेल बजाएँ, मायाले ढोका खोली, आम्मै माया त क्या सेक्सी ड्रेसमा थिई । मायाको शरीरमा सानो स्कर्ट र स्लीवलेस लो-कट ट्युब टि-शर्ट थियो । टि-शर्टबाट उसका पोकाको आधा भाग बाहिरै देखिन्थ्यो साथै दुधका निपल अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । एकछिन त म मायालाई हेरेको हेर्*यै भएँ, मेरो लाँडोले आफ्नो बिभत्स आकार ग्रहण गर्न खोज्दैथ्यो । एक मनले त मायालाई ढोकामै आड लगाएर चिक्न सुरु गरौं जस्तो पनि भयो ।
मायाले हालत बुझिसकेकी थिई, कुटील मुस्कानका साथ “भित्र छिर्ने होइन?” भनेपछी म “खै त बुबा?” भन्दै भित्र छिरें । “बुबा त बिहानमात्र मार्केटिङको सिलसिलामा बुटवल जानु भा’को छ एक हप्ताको लागि ।“ “खुब हट भएर बसेकी छेस् त केटी!” “म त्यस्तो हट देखिन्छु र भन्या? आऽऽऽ.... घरमा बस्दा लुज र सजिलो कपडा लगाउँ भनेर नि...” म झोला लिभिङ रुमको कार्पेटमाथि राख्दै सोफामा सुस्ताए झण्डै तिनदिनको चिकाइको थकान त्यसमाथि गए रातभरीको चिकाईको थकानले केही गलेको पनि थियो ज्यान । माया जुस लिएर आउँछु भन्दै किचनतिर गई, किचनतिर जाँदा मायाले यति मजाले चाक हल्लाउदै गई कि मलाई यस्तो लाग्थ्यो ऊ मोडेलिङ गरिरहेकी छे या मलाई चिक्नको लागि निमन्त्रणा दिदैछे “दाई मलाई समाएर यही भुइमा सुताएर चिक्नुस...।“ मेरो लाँडो मस्तले फूलेर ठन्किसकेको थियो र बाहिर निस्कन आतुर भइसकेको थियो । मायाले जुस ल्याएर मेरो अगाडी दिदै भनि “दाई... जुस लिनुस् ।“ उसका आँखा मेरो लाँडोमाथि केन्द्रित थिए ।
Nepali Incest Sex Story
निकैबेर सम्म मेरो आँखा त्यहा पाएपछी मायाले सोधी “के हेर्नुभएको त्यसरी... एकोहोरो भएर...” मेरो मुखबाट स्वाट्टै निस्क्यो “स्कर्टबाट तेरो पुती देखिरा’छ...!” उसले आफ्नो अनुहारको हाउभाउ बिस्मित बनाइ र भनी “कहिल्यै नदेख्या झैं गरि के हेरिरा’त... अरुको भएपनि हुनु आफ्नै बहिनीको?” “देख्न त धेरैकै देखेको छु नि... तर मेकअप गरेको पुती फर्स्ट-टाइमा देख्दैछु...” “छ्या! एक्लै भएको मौका पारेर मान्छेले आफ्नो दिदी-बहिनी पनि नभन्दा रैछन्...” अनि हातले स्कर्टलाई तल च्यापेझैं गरि । “दिदी-बहिनीहरु यसरी हट भएर दाई-भाईको अगाडी नाङ्गिन्छन् त के गरुन्...! हेर न मेरो भाई त उठेर... भित्र छिर्छु भन्दैछ...” मलाई थाहा थियो उसलाई चिक्नु कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन खाली कुरा सुरु गर्नु गाह्रो हो, त्यो पनि सिधै मैले सुरु गरेपछी कुनै बाधा बन्धन् पनि थिएन । अनि मैले जिन्समा ठन्किएको लाँडोलाई मुसार्दै उसको ध्यानाकर्षण गरें “माया खै एकपटक डिटेलमा हेर्छु नि?” अनि उसको स्कर्ट माथि सारेर उसलाई सोफामा सुताइदिएं ।
Chatpate banaune didi lai rati chikeko katha : Nepali Incest Sex Story
“सबै थाहा रै’छ त? किन ढिलो गर्नुहुन्छ... “ अनि मेरो लाँडो हातमा लिएर खेलाउन थाली । “साँच्चीकै ठूलो छ.... खुब मजा आउछँ ।“ अनि घुँडा टेकेर भुईमा बसेर मेरो लाँडो लोलीपप झैं चुस्न सुरु गरी । “कसरी थाहा पाउनुभयो दाई... म घरकै रण्डी भा’छु भनेर...” “तेरो कम्प्युटरमा भएको सबै भिडियो हेरिसकें नि त मैले!” “दाई भएर बहिनीको व्यक्तिगत चियो गर्ने... सबै दाईहरु बहिनीलाई कसरी चिक्ने भनेर मौका खोजिरा’ हुन्छन् कि क्या हो?” “सबै दाईहरु त हैन ... तँ जस्ता सेक्सी बहिनीका दाईहरु चाँहि हुन्छन्!” मैले उसको टाउको समाएर लाँडोलाई उसको मुखमा भित्रसम्म छिराउने कोशिस गरें, उसले पनि मेरो त्यो प्रयासलाई सहयोग गरि... गलप गलप गर्दै निकै पटक मैले लाँडो उसको गला सम्म पुर्*याएँ । “ल धेरै चुसिस् मेरो लाँडो अब म तेरो पुती चाटिदिन्छु ।“ माया हत्तपत्त पुती फट्याएर सोफामा बसी म घुँडा टेकेर भुईमा बस्दै उसको पुतीमा जिब्रोले खेलाउन थालें ।
केहिबेर लाँडो चुसेपछी मायाले भनि “तपाई सोफामा बस्नुस् बाँकि काम म गर्छु...” अनि म सोफामा बसें ऊ मेरो काखमा पुती फेस्याएर छिराउन आई र आफैं मच्चिन थाली । म उसको पोका समाएर उसलाई सघाउन थालें । निकैबेर म माथि मच्चिएपछी माया मेरो काखबाट उठी र सोफाको साईडमा हात टेकेर उभिई र मलाई चाकतिरबाट पुती देखाउँदै भनि “अब डोगी स्टाईलमा...” मैले पनि उसको कमरमा दुबै हातले समाएर लाँडो उसको पुतीमा सोझ्याँए र फेरी चिक्न थालें । चिक्दाचिक्दै उसले एउटा खुट्टा सोफामा टेकाई जसले गर्दा मलाई चिक्न झनै सजिलो भयो, घरिघरि म उसको पोका पनि समाएर उसमा चिकाईको आनन्द उत्कर्ष सीमामा पुर्*याईदिन्थे ।
मायाले खुट्टा सोफामा टेकाएपछी मेरो नजर उसको चाकको प्वालमा पर्*यो । यसो हेर्दा भर्जिन नै छ जस्तो लाग्यो, मैले चोर औंलाले उसको चाकको प्वाललाई बाहिरैबाट खेलाउँदै भनें “के हो चिकुवाई चाक त भर्जिन छ जस्तो छ नि?” “पुतीको सिल त ड्याडीले चिकेर उद्*घाटन गर्नुभयो, रिकल अंकलले चाकलाई ताकेता गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तपाईको लागि भनेर साँचेको... जतिखेर मन लाग्छ छिराउनुस् मेरो चाकमा...” “शुभ काममा ढीला किन? अहिल्यै चिक्छु तेरो चाकमा....” अनि मैले उसको चाकमा मुखभरी थुक बनाएर खसाले र औंलाले दल्दै उसको चाकको भित्र सम्म चिप्लो बनाउन थालें ।
मायाको आँखाबाट आशुनै झरिरहेको थियो, मैले दया नगरिकन उसको चाकमा चिकिरहेको थिएं, उमाथि दया गर्न थालेको भए म उसको चाकमा चिक्न असफल नै हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई थियो । उसको पीडानै मेरो आनन्दको अनुभुति बढाइरहेको थियो । जब मेरो लाँडोले उसको चाकभित्रै सम्पूर्ण फुसी झार्*यो तबमात्र मैले उसको चाकबाट लाँडो बाहिर निकालें । यो पीडामा मायाको आँखामा लगाईएको गाजल लतपतिएर आँखाको वरिपरी दलिएको थियो र उसको अनुहार कुनै युद्ध जितेर आएको मानिस सरह विजयीभावमा दङ्ग थियो । “साँच्चै मजा भयो है केटी?” “हुन्छ कहीं नपाएर... यी लोग्ने मान्छेहरु अर्काको मनोभावना त बुझ्नै नचाहने...” मैले उसको चाकको पुठ्ठा च्याप्प समाएर अठ्याउँदै भनें “त्यो बुझ्न थाले त यस्तो रमाईलो कहाँ हुन्छ र...?” अनि ऐनातर्फ उसको चाक फर्काएर देखाउँदै भनें “बल्ल त तँ प्योर भालु भइस्... बाउ र दाईको लाँडोले चिकाउने घरेलु भालु...!” उसले मेरो छातीमा आफ्नो अनुहार टसाँउदै मेरो दुधको मुन्टामा किस गर्दै भनि “दाईको लागि त म जे पनि गर्न तयार छु” अनि मेरो लाँडो खेलाउन सुरु गरि ।
निकैबेर उसको पुतीमा भुलेपछी मैले लाँडो उसको पुतीमा छिराएर भनें “ल केटी आज तैंले दाईलाई खुशी पारिस्... तैंले जे भन्छेस् म मान्न तयार छु... ल भन् के भन्छेस्... “ “ह्याऽऽऽ... अहिले खुरुखुरु चिक्नु न ! चिक्ने बेलामा के को गन्थन् गर्नु भा... भन्ने बेलामा म भनिहाल्छु नि... पैला चिकेर मेरो अनुहार सेतो त बनाउनुस्... मलाई सेल्फी लिनु छ...” त्यसपछी म उसको पुतीमाथि मच्चिन थालें, बहिनी मलाई तलबाट चाक उचालेर साथ दिइरहेकी थिई, चिकाईको क्रममा मायाले मुखबाट सित्कार पनि जोडतोडका साथ निकालिरहेकी थिई ““आहऽऽऽ... दाईऽऽऽ.... अझै भित्र छिराउनुस्... पेल्नुस् तपाईको लाँडोऽऽऽ... च्यात्नुस् मेरो पुती... आहऽऽऽ... आहऽऽऽ.... पुरै छिराउनुस्... आहऽऽऽ... मेरो चिकुवा दाईऽऽऽ... चिक्नुस् यो रण्डी बैनीलाई... जताबाट मन लाग्छ तेतैबाट चिक्नुस्... आहऽऽऽ... मेरो सम्पूर्ण ज्यान तपाईकै भयो... ” उसको पुतीमा मच्चिदाँ मच्चिदैं मैले लाँडो पुतीबाट झिकेर पूनः चाकको प्वालमा सेट गरें अनि धमाधम धक्का पेल्न थालें “च्यात्नुस् मेरो चाक... च्यात्नुस्... म तपाईकै रण्डी हो... भालु हो... जे सोचेर चिक्नु छ चिक्नुस् ... तपैंको लाँडोले चिकाउन त म मेरो सारा जिन्दगी सुम्पिन सक्छु... चिक्नुस् अझै बेसरी पेल्नुस् चाकमा परे अस्पताल जाउँला... भन्दिन्छु आफ्नै दाईको ठूलो लाँडो देखेर मन थामेन चाकमा चिकाउन लाग्दा च्यातियो...”
मायाले मेरो लाँडो फेरी मुखमा राखेर रहेलपहेल फुसी पनि चुसी । त्यसपछी उठेर मलाई अँगाल्दै पूनः फोटो खिच्न थाली उसको मुख सेतै थियो तर घरि उसको पोका म समाउँथे, घरि दुवै पोका समाउँथे । अन्तमा उसले मलाई भनि “अघि मलाई मन लागेको कुरा भन् भन्नु भा’हैन...” “हो...!” “त्यसोभे मलाई किस गर्नुस्... जस्ताको तेस्तै हालतमा... पोका निचोर्दै नि फेरी...” मैले भनें “मेरो लाँडोले चिकेको तेरो पुती चाटिसकें, मेरो फुसी चाखेको तेरो ओंठमा किस गरिसकें तेरो चाकमा चिकेर तेरो मुखमा पनि लाँडो छिराइसके अनि तेही मुखमा किस पनि गरिसकें भने अब के बाँकि छ र आफ्नो लाँडोबाट निस्केको फुसीमाथि किस गर्न के को लाज...” अनि उसको फुसी सहितको ओंठमा किस गर्दै सबै फुसी मुखमा लिएं र विस्तारै सक्दो फुसी आफ्नो मुखमा जम्मा गरेर उसको अनुहार सफा बनाएपछी उसको ओंठमा ओंठ जोडेर टङ किस हानें अनि फुसी घरि मायाको मुखमा घरि आफ्नो मुखमा साटासाट गरें, सँगै उसका पुट्ट परेका चिक्दा चिक्दै कडा भएका पोका पनि जोड जोडले निचोर्दै अन्तमा मायाको मुखमा फुसी छोडेर भनें “मलाई वाइल्ड फकिङ इन्टेरेष्टिङ लाग्छ केटी...” अनि मायालाई बोकेर किचनमा पुर्*याएर भुँईमा बस्न लगाएर उसको ज्यानमा लाँडो तेसारेर धरररर मुत्न थालें । उसको शरिर जे होस् मजाले मेरो पिशाबमा लतपत भयो, अनि भुँईमा जमेको पिशाबमाथि पल्टाएर पूनः उसलाई किस गर्दै लडिबुडी गरिरहें ।
मायाले भनि “दाई... तपाईले पनि चिक्नुभयो, बुबाले पनि मलाई चिक्नुभयो, रिकल अंकलले पनि चिकिसक्नुभयो अझ बुबा र रिकल अंकलले त तलमाथि सँगै मिलेर चिक्नुभयो । मलाई अब बुबाको र तपाईको लाँडोले एकैपटक अगाडी र पछाडी चिकाउनु छ, मिले रिकल अंकल पनि तिनै जनासँग एकैपटक चिकाउन मन छ । कसरी मिलाउने हो वातावरण...” “जो मान्छेले आफ्नै छोरी चिकेर आफ्नो साथीलाई पनि सँगै एउटै विस्तारामा चिक्न सक्छ यो ठुलो कुरो नै होईन नि... भोली बुबाहरु आउने बेला भएपछि म तलाई चिक्न सुरु गर्छु त थाहै नपाए झैं गरि आजको जसरी आवाज निकालेर मलाई साथ दिनु अझ बिचबिचमा अर्को प्वालमा पनि चिक्नु भनेर भन्नु फुसी नझरुञ्जेल चिकेको चिकै गर्ने अनि म तेरो मुखमा झार्छु त्यसपछि बुबाले देखेजस्तो गर् र नजिकै गएर मेरो फुसी औंलाले मुखमा लिएर खाँदै बुबाको लाँडो समाउँदै भन् कि अब तपाईको पालो अनि बुबाको जिपर खोलेर लाँडो चुसिहाल्... त्यसपछि मलाई पनि बोला चाकमा चिक्नु भन्दै... छोरी चिक्ने बाउसँग के को लाज... तलाई तेस्तो अप्ठेरो लाग्छ भने सोफामा बसेकै बेला म तेरो पोका र पुती खेलाउन थाल्छु बुढाको अगाडी बरु पेन्टी नलगाई बस् म मुखै जोडेर पुती चाटिदिन्छु तैले बिरोध गरेजस्तो गर... म भन्दिन्छु बुढाकै अगाडी बुबासँग चिकाउन लाज लागेन मसँग किन लाज मान्छेस् भनेर...”
bahini sanga chikeko katha bahinilai chikeko katha bau chori incest story Nepali Incest Sex Story Nepali Sex Story in Nepali